မိတ္ထီလာမြို့ဦး ဗလီနား အောင်ဇေယျာ နယ်မြေရှိ မွတ်စလင် သုဿန်ဟောင်းအား ယနေ့ မနက် ၁၀ နာရီ အချိန်ခန့်က မြေထိုးစက်များ အသုံးပြုပြီး ဖျက်သိမ်းနေ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မိတ္တီလာမြို့ရှိ မွတ်စလင်မ် သုဿန်ဟောင်းကို ယနေ့မနက်မှ စတင်ပြီး ဖျက်သိမ်းလျက်ရှိ
မိတ္ထီလာမြို့ဦး ဗလီနား အောင်ဇေယျာ နယ်မြေရှိ မွတ်စလင် သုဿန်ဟောင်းအား ယနေ့ မနက် ၁၀ နာရီ အချိန်ခန့်က မြေထိုးစက်များ အသုံးပြုပြီး ဖျက်သိမ်းနေကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။
မွတ်စလင်မ် သုဿန်ကို ဖျက်သိမ်းနေချိန်တွင် လုံခြုံရေးအပြည့်ယူထားကြောင်း၊ စစ်သားများ၊ရဲများ၊လုံခြုံရေး လက်ပတ်များ ပတ်ထားသော အရပ်သားများပါ စောင့်ကြပ်နေကြကြောင်း မြို့ခံတဦးက အတည်ပြုပြောကြား လာပါသည်။
မိတ္ထီလာမြို့ ပုံမှန် မရောက်သေးချိန်တွင် အာဏာပိုင်များမှ ယခုလိုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် မြို့ခံများ ပဋိပက္ခများ ထပ်မံဖြစ်ပွားမည်ကို စိုးရိမ်နေကြသည်။ အဆိုပါ မွတ်စလင်မ်သုဿန်ကို ဖျက်သိမ်းရှင်းလင်းပြီး အဝေးပြေးကားဝင်း တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မွတ်စလင်မ်သုဿန်ဟောင်းမှာ သဂြိင်္ုလ်မှု့ကို ပိတ်ပင်ထားသည်မှာ နှစ်အတန်ငယ်ကြာပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါမြေနေရာကို မနှစ်က ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီကို ရောင်းချခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး မြို့ခံ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များမှ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ အသနားခံစာ ပို့ခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဦးပိုင်ကို ရောင်းချသည့် အစီအစဉ်ပျက်သွားပြီး ယခု အဝေးပြေးကားဝင်း တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းကို ဖြစ်လာကြောင်းသိရသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ မှာ ၄င်းတို့ ကွယ်လွန်သွားသော ဆွေးမျိုး မိဘများကို ကောင်းရာသုဂတိလားစေရန် မကြာခဏသွားရောက်ပြီး သုဿန်များသို့သွားရောက်ပြီး ဆုတောင်း မေတ္တာများ ပို့သလေ့ရှိကြောင်းနှင့် သုဿန် ဥယျာဉ်တော်များကို တန်ဖိုးထားကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
This entry was posted on May 28, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အကြမ်းဘက်ပဋိပက္ခများအားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမှ သုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း-၁ ( ဦးအောင်ထူး- ရှေ့နေ)
Prophet Mohammed(SS) and other Image: တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(စ)နှင့်အခြား ဓါတ်ပုံ →